काठमाडौँको खुकुलो निषेधाज्ञामा के खुल्ने के नखुल्ने, कुन बार के खुल्ने ? थप निर्णय सहित - नेपाल घटना
प्रकाशित : २५ भाद्र २०७७, बिहीबार ०७:००
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार आजदेखि जोर विजोर प्राणाली लागू गर्दै १६ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ । ट्याक्सीका हकमा भने चालकसहित ३ जना र परिवारभित्रका भए दुई जना बालक राख्न सकिने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, अत्यावश्यक वस्तुहरु जस्तै खाद्यान्न, दुध वा दुधजन्य पदार्थ, फलफूल, माछा मासु, तरकारी पसलहरु विहान ११ बजेसम्म र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म खोल्न सकिनेछ । ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन भने दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलाउन सकिनेछ । अनलाइन डेलिभरी गर्नेहरु दिउँसो १२ बजेदेखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइनेछ । सपिङ मल तथा अन्य पसलहरु सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार साताको तीन दिन सोमबार, बुधबार र शनिबार खोल्न पाउनेछन्। भान्सामा प्रयोग गरिने समानका पसलहरु भने आइतबार, मंगलबार र शुक्रबारमात्र खोल्न पाइनेछ।
फर्निचर र अटो मोबाइलसम्बन्धी पसलहरुको हकमा भने साताको दुई दिन सोमबार र बुधबारमात्र खोल्न दिइनेछ। उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्दा कामदारको खाने बस्ने व्यवस्था उद्योग परिसरमै गर्नुपर्ने र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन्पर्नेछ ।
पसल खोल्न सरकारले तोक्यो दिन, कुन दिन कस्ता पसल खुल्छन्?
सरकारले विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि उपत्यकामा समय तोकेको छ।
बार र समय अनुसार पसल खोल्न दिने गरी मापदण्ड तयार गरिएको हो।
चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी बजार अनुगमन तीव्र पारिने